नीति तथा कार्यक्रममा ‘मेरो सरकार’ घुसाउन प्रधानमन्त्रीको हात, प्रचण्ड नै अचम्म !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
मिडिया डबली प्रकाशित : आइतवार, बैशाख २२, २०७६
काठमाडौं – आर्थिक ०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘मेरो सरकारले … गर्नेछ…’ भन्दै २१ पटकभन्दा बढी सम्बोधन गरिन् । यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा जनता नै सर्वोपरी हुने भन्‍ने संविधानमा नै उल्लेख छ । हिजोका दिनमा राजा संविधानभन्दा माथि हुन्थे र राजाले सम्बोधन गर्दा ‘मेरो सरकारु भनेर सम्बोधन गर्दथे । तर, त्यत्रो लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त संविधानलाई नै नमान्‍ने गरी राष्ट्रपतिले संघीय संसदको संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्दै ‘मेरो सरकार…’ दोहोर्‍याइ रहिन् ।
अहिले यो विषय निकै विवादमा तानिएको छ । सत्तारुढ दल नेकपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै पनि निकै विवादको विषय बनेको छ । सत्तारुढ दलका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै यो विषयले आश्‍चार्यचकित भएका छन् । राजाले भन्‍ने गरेको ‘मेरो सरकार’ हटाएर जनताको सरकार स्थापित गर्न अर्थाथ मुलुकलाई एकतन्त्रीय राजतन्त्रबाट मुक्ति दिलाउन अह्‍म भूमिका निर्वाह गरेका प्रचण्ड नै यस विषयले गम्भीर कुराको संकेत गरेको बताएका छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गरेको २६ पृष्ठ लामो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम त्यहाँ प्रस्तुत हुनुअगावै नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत पढेका रहेछन् । तर, प्रचण्डले पढ्दा त्यहाँ ‘मेरो सरकार’ लेखिएको थिएन ।
प्रचण्डले पढेको नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बाहेक अरुले पढ्ने पहुँचमा हुँदैन । त्यसमा ‘मेरो सरकार’ घुसाउने काममा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिबाहेक पार्टीका अन्य नेताहरुको संलग्‍नता रहनसक्ने सम्भावना शून्‍य दशमलव १ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परिवर्तन गर्ने एकल अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । उनको सबै कामहरु नेपाली सेनाले हेर्ने गरेको छ । नेपाली से‍नाले तत्काल परिवर्तन गरेर नेपाल सरकारको ठाउँमा मेरो सरकार राख्‍न सक्दैन ।
नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा नेकपा संसदीय दलका उनपेनता सुभासचन्द्र नेम्वाङको समेत उल्लेखनीय योगदान थियो ।
शनिबार दिउँसो आयोजित नेकपा संसदीय दलको बैठकको प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित थिएनन् । त्यहाँ नेकपा सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रममा ‘मेरो सरकार’ भनिएकोबारे प्रश्न उठाए । सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले ‘मेरो सरकार’ आफूले पढ्‍दा नभएको तर संसदमा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्दा एकाएक ‘मेरो सरकार’ दोहोर्‍याइरहेकोमा आफैं अच्‍चममा परेको बताएका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले ‘मेरो सरकार’ भन्ने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै रहेको भन्दै हल्का रुपमा विषयलाई मोड्‍नतिर लागे । उनले यस विषयलाई जसरी पनि पन्छाउनतिर लागे । आफ्नै गल्ती ढाकछोप गर्न प्रधानमन्त्रीले ढाकछोप गरेपछि प्रचण्डले पनि कुरा काट्‍न सकेनन् । उनले पनि टाउको हल्लाएर प्रधानमन्त्रीकै कुरालाई समर्थन जनाए । तर, सोही बैठकमा नेकपाकै सांसदहरुले केपी ओलीलगायतको नेतृत्व मण्डलीले हुकुमी शैली अपनाएको भन्दै बैठकमा गुनासो गरे ।
दलको बैठकमा उपनेता सुवास नेम्वाङले निकै लामो मन्तव्यसहित सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको व्याख्या गरेका थिए । तर, सांसदहरुले आफूहरुलाई राजाले पटांगिनीमा राखेर निर्देशन दिएको जस्तो गरियो भन्दै नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न पाउनुपर्ने माग गरे ।
सुवास नेम्वाङको कुरामा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले आपत्ति जनाइन् र बैठकमा भनिन्, ‘उपनेताको कुरा सुन्दाखेरि नीति कार्यक्रम पास गरिसकेर प्रधानमन्त्री कम्बोडियामा भएका बेलामा दलको बैठक बस्‍ने भन्ने सुनियो, यस्तो छलफल त अन्त पनि गर्न सकिन्छ । नीति कार्यक्रमकै विषयमा हाम्रा कतिपय असहमतिहरु छन् । हाउसमा आफ्नो कुरा त गर्छौं नै, संसदीय दलमा छलफल गर्ने वातावरण नबनाउने यो कुन तरिका हो ? राष्ट्रपतिलाई ड्राफ्ट गरेर बुझाएको नीति तथा कार्यक्रमको शब्दावलीप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।’
रामकुमारीले जस्तै अर्का सांसद जनार्दन शर्माले पनि राष्ट्रपतिबाट मेरो सरकार भनिएकोमा आपत्ति जनाए ।
अर्का सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले आक्रोशित हुँदै भने, ‘२४ गते नीति कार्यक्रम पास गर्ने ह्वीप छ भनेर म्यासेज पठाएको भए हुन्थ्यो, किन यो बैठक राखेको ? यो पार्लियामेन्ट्री कमिटी हो, तपाईहरुले सुनाउने, हामीले सुन्ने ? तपाईहरुका मात्रै कुरा सुन्न हामीलाई बोलाएको हो ? पारितै गर्दिनुपर्ने हो भने पार्टीको सरकार छ, पास गरिदिउँला । तर, छलफल गर्न त दिनु परो नि ।’
तर, सांसदहरुले हुँदैन र छलफल गरिनुपर्छ भन्दाभन्दै नेकपा संसदीय दलको शनिबारको बैठक नेताहरुको भाषणबाजीपछि विना निश्कर्ष सकिएको छ ।
सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा संसदमा आइतबारदेखि छलफल हुँदैछ । मंगलबार यो प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ । यसमा कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव हालेको छ भने नेकपाभित्र पनि असन्तुष्टि छ । तथापि नेकपाका सांसदहरु मन नलागी नलागी यसलाई पारित गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
नेपालमा आयोजित एशिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका बेला कम्बोडियाका तानाशाही शासक हुन सेनले दिएको निम्तो मान्न प्रधानमन्त्री ओली त्यसतर्फ जान लागेका हुन् ।
यी सबै घटनाको श्रृंखलाबाट पनि स्पष्ट बुझ्‍न सकिन्छ कि प्रधानमन्त्री ‌ओली नै सामन्तवादलाई स्थापित गराउन चाहान्छन् । उनले यसअघि सबै संवैधानिक निकाय आफ्नो मातहतमा ल्याउँदा पनि अधिनायकवाद सुरु गर्न खोजेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भए पनि प्रधानमन्त्रीले यस विषयलाई पनि हल्का ढंगमा लिए र ठट्यौलीमै उडाए । तर, यस्तै हरेक सानो-सानो कुरामा गम्भीर नभएर जबर्जस्ती दुई तिहाइको आडमा मुलुकलाई फेरि तानाशाही शासन पद्धती लाद्‍न खोजिँदै छ । यस विषयमा जनता गम्भीर र सजग हुनुपर्छ । यो विषयमा मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्दै अन्य दलहरुको सहयोगमा मुलुकलाई तानाशाही शासनमा जानबाट रोक्न जरुरी छ । अब पनि ढिला गरियो भने मुलुक फेरि संकटमा पर्ने निश्चित छ ।